कोरोना भाइरस संक्रमितलाई उपचार गर्न पोखरामा ६० शैयाको आइसोलेसन वार्ड तयार – Samacharpati
पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले कोरोनाको संक्रमण फैलन सक्ने भन्दै तयारी गरिरहेको छ । प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयको स्वास्थ्य निर्देशनालयका प्रमुख डा. विनोद विन्दु शर्माले कोरोना संक्रमण फैलिन नदिन प्रदेशका २ वटा अस्पताललाई हब अस्पताल र २७ अस्पताललाई स्याटेलाइट अस्पतालको रुपमा उपयोग गर्ने गरि तयारि गरिएको बताउनुभयो ।
यस्तै पोखरामा तत्कालका लागि ६० बेडको आइसोलेसन वार्ड तयारी अवस्थामा राखिएको छ । जसमा मणिपाल शिक्षण अस्पतालमा १५ बेड, गण्डकी मेडिकल कलेजमा १५ बेड, चरकमेमोरियलमा २७ बेड र पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा ३ वटा बेड रहेका छन् ।
यसैबिच क्वारेन्टाइनका लागि संभावित स्थलको खोजी भइरहेको डा. शर्माले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार साविकको लेखनाथ नगरपालिकाको भवन, एकअर्कामा गाभिएर खाली भएका विद्यालय वा अन्य खाली ठाउँको विषयमा अध्ययन भईरहेकोछ ।
कोरोनाको संक्रमण रोक्न तथा सावधानी अपनाउन भन्दै गण्डकी प्रदेशले १ महिनाअगाडि नै टास्क फोर्स गठन गरेको थियो । सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत प्रदेश स्वास्थ्यनिर्देशक डा. शर्माको संयोजकत्वमा गठित टास्क फोर्सले नै कोरोनाको सतर्कताअपनाउने काम गर्दै आएको छ ।
प्रदेशमा सम्भावित विरामीको नमूना संकलन तथा सावधानीका लागि चिकित्सकलेलगाउने सामाग्री नै पर्याप्त छैनन् । केही दिनअघि जम्मा ५ सेटमात्र रहेकोमा अहिलेप्रदेशमै जम्मा २५ सेट सावधानीमा लगाउने सामाग्री उपलब्ध छ तर डा शर्माका अनुसार ४अस्पतालमा एक सिफ्टमा २७ सेट सावधानीका लागि लगाउने सामा्रीको आवश्यकता पर्दछ। यद्यपी विशेष प्रकारको हेलमेट, पञ्जा,मास्क लगायतका सामाग्री खरिद गर्न सामाजिक विकास मन्त्रालयले पाँच लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ ।
गण्डकी प्रदेशमा हवाईयात्रामार्फत आउने पर्यटकको अवस्था बुझ्न २ ठाउँमाहेल्थ डेस्क राखिएको छ । पोखरा विमानस्थल र मुस्ताङमा हेल्थ डेस्क राखेर स्वास्थ अवस्थाबुझ्ने काम भइरहेको प्रदेश स्वास्थ निर्देशनालयले जानकारी दिएको छ । पोखरा विमानस्थलमा हेल्थ डेक्स राखेर पर्यटकको अवस्था बुझ्ने काम भईरहेको पोखरा विमानस्थलका सुचना अधिकारी देबेन्द्र सुवेदीले बताउनुभयो । पोखरा विमानस्थलमा हेल्थ डेक्स राखिएपनि त्यति प्रभावकारी नभएको सर्वसाधारणले गुनासो गरेका छन् ।
चिनको वुहानबाट सुरु भएको कोरोना भाइरस (कोभिड १९) यतिवेला विश्वका७० देशमा फैलीसकेको छ । विश्वभर कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट मर्नेको संख्या३ हजार १ सय २५ पुगेको छ । पछिल्ला दिन कोरोना भाइरसको संक्रमित संख्या चीनमाघट्दै गएको छ भने दक्षिण कोरिया, इरान, इटाली, अमेरिकामा लगायतका देशमा बढ्दैगएको छ ।
मानव बसोबास रहेका सबै महादेशमा कोरोना भाइरसका संक्रमित भेटिएका छन् ।सन् २०१९ डिसेम्बरको अन्तिम साता कोरोना भाइरस पहिलो पटक चीनको हुबेइप्रान्तको राजधानी वुहानमा देखिएको थियो । त्यसपछि यो भाइरस विश्वभर फैलने क्रममारहेको छ ।
यसैबीच नेपाल सरकारले कोरोनाको संक्रमण फैलन सक्ने भन्दै ठुला कार्यक्रमसभासमारोह र भोजभतेर नगर्न आह्वान नै गरिसकेको छ । सर्वोच्च अदालतले अन्तराष्ट्रियउडान रोक्न निर्देशन नै दिईसकेको छ ।
कोरोनाको संक्रमणको जोखिमको कारणदेखाउदै उपराष्ट्रपति नन्द बहादुर पुनले सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागि नहुने जनाइएको छ। उपराष्ट्रपतिले निश्चित भइसकेका सार्वजनिक कार्यक्रम स्थगन गर्न र थप कार्यक्रम नलिन नीजिसचिवालयलाई निर्देशन दिईसक्नु भएको छ ।
यता जिल्ला प्रशासन कार्यलय कास्कीले पनि पोखरामा कुनैपनि कार्यक्रम र खेलगतिविधि रोक्न आग्रह गरेको छ । तर पोखरामा २२ गतेबाट आहा रारा गोल्डकप,टुडिखेलमा २३ गतेबाट कृषि तथा पर्यटन महोत्सब र होली पर्व लगायतका कार्यक्रमहरु तयगरिएको छ ।
कास्की प्रशासनले कार्यक्रम रोक्न आग्रह गर्ने तर कार्यक्रम भईरहने हो भनेभोली आउने संभावित जोखिमलाई कसरी न्युनिकरण गर्न सकिएला यस तर्फसरोकारवालाहरुको ध्यानाकर्षण हुनु जरुरी देखिन्छ । कास्की प्रशासनले यस्ता कार्यक्रमहरुरोक्न विशेष निर्देशन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।